Induction Kuomesa Kumusoro Maitiro Zvikumbiro-HLQ Inoomesa Heater
Induction Kuomesa Kumusoro Maitiro Maapplication
Chii chinonzi induction kuomesa?
Induction kuoma chimiro chekurapa kwekupisa umo simbi chikamu chine kabhoni yakakwana inodziyirwa mumunda weiyo induction uye ndokukurumidza kutonhora. Izvi zvinowedzera zvese kuomarara uye brittleness yechikamu. Induction Heating inokutendera iwe kuti uve nenzvimbo yekupisa kune pre-yakatarwa tembiricha uye inoita kuti iwe unyatso kudzora kuomesa maitiro. Maitiro ekudzokorora anotsigirwa. Kazhinji, kuomeswa kweiyo induction kunoiswa kune simbi zvikamu zvinofanirwa kuve neakakura ekumusoro ekupfeka kuramba, nepo panguva imwechete ichichengetedza yavo yemagetsi zvivakwa. Mushure mekugadziriswa kweiyo induction, simbi yekugadzira simbi inoda kudzimwa mumvura, mafuta kana mweya inorder kuti uwane zvimwe zvivakwa zvepamusoro pevhu.
Induction kuoma inzira yekukurumidza uye nekusarudza kuomesa pamusoro pechikamu chesimbi. Coil yemhangura inotakura yakanyanya nhanho yekuchinjisa ikozvino inoiswa padyo (isingabati) chikamu. Kuchenesa kunogadzirwa pa, uye padyo nepadenga neddy zvazvino uye kurasikirwa kwehysteresis. Quench, kazhinji mvura-yakavakirwa pamwe nekuwedzera senge polymer, inotungamirwa pachikamu kana yakanyudzwa. Izvi zvinoshandura chimiro kuti chiite martensite, inova yakaoma zvikuru kupfuura iyo yekutanga mamiriro.
Rudzi rwakakurumbira, rwemazuva ano rwekuomesa michina inonzi scanner. Chikamu chinoitirwa pakati penzvimbo, chakatenderedzwa, uye chakapfuura nepakati pekoriri inofambira mberi iyo inopa zvese kupisa uye kudzima. Iko kudzima kunotungamirwa pazasi peoil, saka chero nzvimbo yakapihwa yechikamu yacho inotonhorera nekukasira zvichitevera kupisa. Simba remagetsi, nguva yekugara, scan (feed) chiyero uye mamwe maitiro akasiyana anodzorwa chaizvo nekombuta.
Nyaya yekuomesa mashandiro anoshandiswa kuwedzera kupfeka kusagadzikana, kuomarara kwepasi uye kuneta hupenyu kuburikidza nekugadzirwa kweyakaomeswa nzvimbo yakaturikidzana uchichengetedza isina kukanganiswa yakakosha microstructure.
Induction kuoma inoshandiswa kuwedzera michina zvivakwa zveferrous zvikamu mune yakatarwa nzvimbo. Chaizvoizvo zvikumbiro ndeye powertrain, kuturika, injini zvikamu uye stampings. Induction kuomesa kwakanakisa pakugadzirisa garandi zvirevo / kutadza kwemunda. Iwo ekutanga mabhenefiti kuvandudzwa kwesimba, kuneta uye kupfeka kuramba munzvimbo yakasarudzika pasina kugadzirisazve chinhu chacho.
Maitiro nemaindasitiri ayo anogona kubatsirwa neyakaomeswa induction:
Tube & Pipe kuomesa
Zvakanakira Induction Kuomesa:
Yakafarirwa nezvezvinhu izvo zvinoiswa pasi pekuremerwa kurodha. Induction inopa yakanyanya kuomarara kwepasi neakadzika kesi inokwanisa kubata yakanyanya kukwirira mitoro. Kuneta simba rinowedzerwa nekuvandudzwa kweiyo yakapfava musimboti yakakomberedzwa neyakaomarara zvakanyanya yekunze. Izvi zvivakwa zvinodikanwa kune zvikamu zvinosangana nekukwirisa kurodha uye nzvimbo dzinosangana nemasimba masimba. Induction kugadzirisa kunoitwa chikamu chimwe panguva ichibvumidza inofungidzirwa zvikuru mafambiro epamoyo kubva kuchikamu kuenda kuchikamu.
Kunyatso kudzora pamusoro pekushisa uye kuomesa kudzika
Kudzora uye kwenzvimbo kudziyisa
Yakabatanidzwa nyore nyore mumitsara yekugadzira
Inokurumidza uye inodzokororwa maitiro
Chigadziro chega chega chebasa chinogona kuomeswa nematanho akanyatsogadziriswa
Simbi uye isina simbi-simbi zvinhu izvo zvinogona kuomeswa neiyo induction:
Fasteners, flanges, giya, mabheyaringi, chubhu, yemukati neyekunze nhangemutange, crankshafts, camshafts, majoko, kutyaira miseve, kuburitsa miseve, spindles, torsion mabara, slewing mhete, waya, mavhavha, matombo ekuboora, nezvimwe.
Yakawedzera Kupfeka Kuramba
Pane kuwirirana kwakananga pakati pekuoma uye kupfeka kuramba. Iko kusakara kwekupokana kwechimwe chikamu kunowedzera zvakanyanya neyakaomeswa induction, tichifungidzira iyo yekutanga mamiriro ezvinhu acho angave akawedzeredzwa, kana kurapwa kune yakapfava mamiriro.
Kuwedzerwa Simba & Kuneta Hupenyu nekuda kweSoft Core & Residual Compress Stress paSurface
Iko kushushikana kushushikana (kazhinji kunofungidzirwa sehunhu hwakanaka) mhedzisiro yeyakaomeswa chimiro padyo nepasi inogara zvishoma vhoriyamu kupfuura yepakati uye yekutanga mamiriro.
Zvikamu zvinogona kutsamwiswa mushure Induction Kurwisa Kugadzirisa Kuomarara Chikamu, sezvaunoda
Sezvo nechero nzira inogadzira mamartensitic chimiro, kutsamwa kunodzora kuomarara uchidzikira brittleness.
Yakadzika Nyaya neyakaomarara Core
Chaizvoizvo kudzika kwenyaya ndeye .030 "- .120" iyo yakadzama pavhareji pane maitiro akadai se carburizing, carbonitriding, uye dzakasiyana nzira dze nitriding dzinoitwa panotonhora zvakanyanya. Kune mamwe mapurojekiti senge maasero, kana zvikamu izvo zvichiri kubatsira kunyangwe mushure mekunge zvinhu zvakawanda zvasakara, nyaya yakadzika inogona kusvika kuma inchi kana kupfuura.
Inosarudza Kuomesa Maitiro pasina No Masking Inodikanwa
Nzvimbo dzine post-welding kana post-machining dzinogara dzakapfava - mashoma kwazvo mamwe maitiro ekurapa kupisa anokwanisa kuzadzisa izvi.
Semuenzaniso: shaft 1 "Ø x 40" yakareba, iyo ine maviri akaenzana akapatsanurwa, imwe neimwe 2 "yakareba inoda kutsigirwa nemutoro uye kupfeka kuramba. Induction kuomesa kunoitwa pane iwo chete maratidziro, huwandu hwe4 ”kureba. Nemaitiro akajairwa (kana kana isu tikaburitsa takaomesa hurefu hwese hwechinhu ichocho, paizove nekuwedzera zvakanyanya warpage.
Inotendera kushandiswa kweZvakaderera Mutengo Zvivakwa senge 1045
Iyo simbi inonyanya kufarirwa inoshandiswa muzvikamu kuti ive induction yakaoma ndeye 1045. Iyo iri nyore kugadziriswa, yakachipa mutengo, uye nekuda kwekabhoni ine 0.45% yezita, inogona kunge iri induction yakaoma kusvika ku58 HRC +. Iinewo mukana wakaderera wekutsemuka panguva yekurapa. Zvimwe zvinhu zvinozivikanwa zveichi chiito 1141/1144, 4140, 4340, ETD150, uye akasiyana masimbi akakanda.
Zvikanganiso zveInduction Kuomesa
Inoda Induction Coil uye Tooling inoenderana neiyo Chikamu cheGeometry
Sezvo chikamu-ku-coil yekubatanidza daro chakakosha pakupisa kupisa, saizi yaroil uye contour inofanirwa kunyatsosarudzwa. Nepo vazhinji varapi vaine arsenal yezvakakosha coils kupisa maumbirwo akapoterera senge miseve, mapini, ma rollers nezvimwe, mamwe mapurojekiti angangoda tsika yetail, dzimwe nguva inodhura zviuru zvemadhora. Pakati pepakati kusvika kune yakakwira vhoriyamu mapurojekiti, iyo bhenefiti yemitengo yekurapa yakaderedzwa pachikamu chimwe inogona kudzora mutengo weoil. Mune zvimwe zviitiko, iyo enjiniya mabhenefiti eichi chiitiko anogona kupfuura mutengo zvinonetsa. Zvikasadaro, kune yakaderera vhoriyamu mapurojekiti iyo coil uye yekushandisa mutengo zvinowanzoita kuti maitiro asashande kana coil nyowani ichifanira kuvakwa. Chikamu chacho chinofanirawo kutsigirwa neimwe nzira panguva yekurapa. Kumhanya pakati penzvimbo inzira inozivikanwa yeiyo shaft mhando zvikamu, asi mune dzimwe nguva dzakawanda tsika yekushandisa inofanirwa kushandiswa.
Hukuru Huru Humwe hweKutsemuka Kuenzaniswa neakawanda Mahara Kurapa Maitiro
Izvi zvinokonzeresa nekukasira kudziya uye kudzima, zvakare maitiro ekugadzira nzvimbo dzinopisa pazvinhu / micheto senge: makiyi, maburi, maburi ekuyambuka, tambo.
Kukanganisa neInduction Kuomesa
Matanho ekutsauka anowanzo kuve akakura kupfuura maitiro senge ion kana gasi nitriding, nekuda kwekukurumidza kupisa / kudzima uye kunoguma shanduko yemartensitic. Izvo zviri kutaurwa, kuomeswa kwe induction kunogona kuburitsa kukanganiswa kushoma pane kwakajairika kupisa kurapwa, kunyanya kana kuchingoshandiswa kune yakasarudzwa nzvimbo.
Kukanganiswa Kwezvinhu neInduction Kuomesa
Sezvo induction kuomesa maitiro hazviwanzo kuve nekupararira kwekabhoni kana zvimwe zvinhu, izvo zvinhu zvinofanirwa kunge zvine kabhoni yakakwana pamwe nezvimwe zvinhu kuti zvipe kuomarara kunotsigira shanduko yemartensitic kusvika padanho rekuomarara kwaunoda. Izvi zvinowanzoreva kabhoni iri mu 0.40% + renji, ichigadzira kuomarara kwe56 - 65 HRC. Dzakadzika kabhoni zvinhu senge 8620 inogona kushandiswa nemhedzisiro kudzikisira mukuwanika kuoma (40-45 HRC mune iyi kesi). Simbi dzakadai se1008, 1010, 12L14, 1117 hadziwanzoshandiswa nekuda kwekuwedzera kushoma kwekuoma kunogoneka.
Induction Kuomesa Kumusoro Maitiro enhoroondo
Induction kuoma inzira inoshandiswa pakuomesa kwepamusoro kwesimbi uye zvimwe zvikamu zvealloy. Izvo zvikamu zvinorapwa kupisa zvinoiswa mukati mekoriri coil uye zvobva zvadziisa pamusoro peiyo tembiricha yekushandura nekuisa inochinja inochinja kune iyo coil. Iko kuchinjika kwazvino muiyo coil kunokonzeresa inochinja yemagineti mukati meichi chikamu chebasa icho chinokonzera iyo yekunze nzvimbo yechikamu kupisa kune tembiricha pamusoro peiyo shanduko renji
Izvo zvinhu zvinodziyirwa kuburikidza nekuchinjanisa magineti kune tembiricha mukati kana pamusoro peiyo shanduko renji inoteerwa nekukurumidza kudzima. Iyo electromagnetic maitiro anoshandisa mhangura inductor coil, iyo inodyiswa yazvino pane yakatarwa frequency uye simba nhanho.
Categories FAQ, Technologies Tags tenga induction yekuomesa muchina, kuomesa, kuomesa induction, kuoma pamusoro, kuomesa kwepasi maitiro, induction hardening heat, induction hardening machine, induction kuomesa muchina mutengo, induction kuomesa mutengo, induction kuomesa maitiro, Induction kuomesa pamusoro, induction kuomesa system, chii chinonzi induction kuomesa Post navigation